Top 5 Mmezi Ahịa Onlinentanetị | Martech Zone
Obi esichaghị m ike na okwu ahụ masịrị m ndudue ọ bụrụ n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. N'uche nke m, ndudue bụ ihe nwere ike imerụ ika gị ma ọ bụ aha gị… mana ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị eme mmejọ ndị ahụ oge niile. Ihe omuma a site na Ulo ahia na-arụtụ aka na njehie ndị kachasị akọwapụtara site na ọtụtụ ihe nchịkwa na ụlọ ọrụ ịntanetị.
Otu n'ime okwu ha tụrụ - 83% nke ndị ọrụ Facebook na-ekwu na ha adịkarịghị ma ọ bụ pịa na mgbasa ozi Facebook. N’ịbụ ndị wuru mgbasa ozi mgbasa ozi dị irè nke facebook maka ụfọdụ ihe anyị, ekwetaghị m na ọ bụ mmeghe. Mgbasa ozi ndị dị ọnụ ala ma mee ka mgbanwe ndị anyị na-achọ. Dị ka ndụmọdụ niile, a ga-anwale ndụmọdụ na nkuzi na ihe omuma a tupu ịdepụ ha.
Enwere ụfọdụ stats na-enye aka, agbanyeghị, dịka 49% nke ndị nwere obi ụtọ na nzụta ha ga-adịbeghị anya mepee ozi ịntanetị n'ọdịnihu 7x ngwa ngwa karịa ndị na-azụbeghị ahịa n'ime ọnwa atọ gara aga. Nke ahụ bụ ụdị nke ọnụahịa ọ bụla kwesịrị ịkwalite!
Tags: Njehie 5ihie ahiaonline ahịaemehie ihe n'ịntanetịtop 5 emehie
Ikwere na ikwere ekwere
Jul 14, 2012 na 3: 36 AM
Nnukwu ihe omuma! Daalụ maka ichetara na ịkekọrịta nghọta a. Mgbochi dị ezigbo mkpa iji nweta ihe ịga nke ọma n'ịntanetị.